Nine Pine Mountain House 201 Buddhist Zen Residence (nceda wenze ugcino emva kokufunda "Inkcazo yeNdlu" Enkosi! Ngamanye amagumbi kwi-villa, nceda ucofe kumfanekiso)
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe ongu凌斌
Ingqikelelo yeendawo zokuhlala e-China isekwe ikakhulu kwiihotele ezineempawu ezakhiwe ngabatyali-mali abarentisa izindlu, ngelixa kumazwe angaphandle uninzi lwayo ingamakhaya abantu bomthonyama balapha ekhaya. Ndisuka eHangzhou unkosikazi wam ungowaseJiaxing kwidolophu yasemanzini, siphumelele kwiDyunivesithi yaseZhejiang kunye, ndisebenza kunye neshishini, unkosikazi wam lusapho lwamayeza aseTshayina. Injongo yantlandlolo ye-Open Residence yayikukubelana ngengqokelela yam kunye nokuba negalelo elincinane kweyam iprojekthi yentlalo-ntle yoluntu. Ngenxa yeemfuno zokhuseleko lokuqokelela kunye nomyalelo wendlu. Ayikhuthazwa kubantu abadala, abo banabantwana, kunye nabo bafika eHangzhou ebusuku kakhulu. Ukuba uhlangabezana neemeko, nceda uthumele isicelo sombhalo kuqala: "Mna nomama sihamba e-Hangzhou" "Mna nomfana wam sikwiholide yeveki" "Mna kunye nomntu osebenza naye sikuhambo lomsebenzi" ... Indawo ye-villa ibekwe ecaleni West Lake Botanical Garden, ngokufihlakeleyo in ioksijini bar enkulu ehlathini. Isikhululo sebhasi esikhokelela kwiTempile yaseLingyin sisecaleni kwayo. Ukuhamba kulo lonke elaseWest Lake ngokobuqu ucinga ukuba okoko nje ukhwele ibhayisekile, ungayenza. Itempile edumileyo yaseLingyin ikumgama wokuhamba. Iindawo zokutyela ezidumileyo kwi-Intanethi nazo macala onke. Abahlali basekhaya ikakhulu balima iti. Ewe, kukho abathengi basekhaya abafika kade.Amashumi ezigidi zamaxabiso ezindlu amisela udidi lwale yokugqibela. Ke ngoko, ukungafani kokunyamezelana kuluntu kunokubonwa njengeyona ndawo ikhethekileyo kumxholo waseTshayina. uphuhliso olukhawulezayo. Wamkelekile kwilali yeti ukuze ube namava obomi (wamkelekile ukuba uze nencwadi engasebenziyo enempembelelo ukutshintshiselana ngetoti enye okanye ezimbini ezincinci zeti eyenziwe ekhaya iLongjing exabisa i-50 yuan, kunye nokuba negalelo kulungiselelo lwethu lwevenkile yeencwadi yoluntu) Wamkelekile kumava umahluko Akwaba impumelelo ebomini bakho humanistic!
Isikhundla sejografi siphezulu, kwaye ilokishi yeti ityebile ngokwenkcubeko. Intsapho yethu yamalungu amathathu nayo inokugqalwa njengekhaya labakhenkethi, kwaye nyaka ngamnye siya kuya kwiindawo ngeendawo zehlabathi ukuze siqokelele iindawo ezibukekayo. Ukuvulwa kwale ndawo yokuhlala kukwakhuthazwa ngamava endawo yokulala yaphesheya kweelwandle. Ndikwanethemba lokusebenzisa inxalenye yengeniso ukwenza into yesisa. Wamkelekile wonke umntu, wamkelekile eHangzhou!
Iindawo zokuhlala ziindawo ezinqabileyo eHangzhou. Kukwayenzeka ukuba kubekho indawo ekumgangatho ophezulu ekudibaneni kwendawo ebukekayo kunye nommandla wedolophu.Izibonelelo zothutho kunye nenkxaso zigqityiwe.
Umbuki zindwendwe ngu- 凌斌
Unokukunika uncedo oluyimfuneko njengomhlobo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hangzhou